6 ဘတ်ဂျက်အပေါ်အုပ်စုတစ်စုခရီးစဉ်စီစဉ်ရန်ကျွမ်းကျင်သောအချက်များ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >6ဘတ်ဂျက်အပေါ်အုပ်စုတစ်စုခရီးစဉ်စီစဉ်ရန်ကျွမ်းကျင်သောအချက်များ
ခရီးသွားခြင်းသည်သင်ဝယ်ယူရန်သို့မဟုတ်ကြွယ်ဝချမ်းသာရန်သင်ဝယ်ယူသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုမှန်ကန်စွာယုံကြည်သည်! ထို့အပြင်စည်းစိမ်ကြွယ်ဝရန်အတွက်သင်ကြိုးစားအားထုတ်ထားသောငွေများနှင့်ဝေးဝေးနေရန်မလိုအပ်ပါ. နေရောင်နမ်းနေသည့်အပူပိုင်းကျွန်းများသို့ထွက်ခွာရန်စီစဉ်နေစဉ်, သို့မဟုတ် နှင်းဖုံးနှင်းလျှောစီးတောင်စောင်း, သို့မဟုတ်အခြားစိမ်းလန်းစိုပြေသောစိမ်းလန်းသောသဲကန္တာရ, သငျသညျအစဉ်မပြတ်မြောက်မြားစွာဆုံးဖြတ်ချက်တွေလုပ်နေပါတယ်. ရှုပ်ထွေးမှုကိုမဖြစ်စေခြင်းဖြင့်သင်၏အိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါ. သင့်အဖွဲ့နှင့်အတူထိုင်။ သင့်ဘတ်ဂျက်အတွင်းစီစဉ်ပါ. ခရီးတစ်ခုလုံးကိုပါးရည်နပ်ရည်ရှိစေပါ. အုပ်စုလိုက်ခရီးများသည်အလွန်ခင်မင်ရင်းနှီးမှုအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်. ဒါပေမယ့်အားလုံးချောချောမွေ့မွေ့ရွက်လွှင့်, စုံလင်ခြင်းနှင့်အတူစီစဉ်ထားမဟုတ်လျှင်. ခရီးစရိတ်ကိုခြေရာခံရန်ယုတ္တိမရှိဟုထင်ရနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်သိပ်များစွာသောဝှက်ထားသော glitches ရှိပါတယ်. အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များနှင့်သက်ဆိုင်သောအနုတ်လက္ခဏာ attribute တွေအားလုံးကိုရှောင်ပါ. ဘတ်ဂျက်နှင့်အဆင်ပြေလွယ်ကူသောအုပ်စုခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ရန်ပါးနပ်သောအကြံပေးချက်များဖြစ်သောအခက်အခဲကင်းသောအကြံပေးချက်ခြောက်ခုကိုအောက်တွင်ဖတ်ပါ.
1. တစ် ဦး ကခရီးသွားဘတ်ဂျက်ဆုံးဖြတ်ရန်
ဟုတ်ကဲ့! မင်းမှန်ပါတယ်! စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတရရန် ဦး တည်ရာကို ဦး စွာဆုံးဖြတ်သင့်သည်. ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံမှာလှည့်စားတတ်တယ်, နှစ် ဦး စလုံးအပြန်အလှန်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်အဖြစ်. ထို့အပြင်အလွန်ရှုပ်ထွေးသည့်ကိစ္စဖြစ်သည်. သင်သည်သူငယ်ချင်းအုပ်စုတစ်စုနှင့်သင်၏နောက်ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်နေသော်လည်း, အားလုံးမညီမျှစွာတတ်နိုင်သည်မဟုတ်. ထို့ကြောင့်, ကန့်သတ်ဘတ်ဂျက်နှင့်အတူရ, တညီတညွတ်တည်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်. စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်လာလိမ့်မည်, အုပ်စုအများစုသည်အတော်အတန်များသောအသုံးစရိတ်များအတွက်ဖိအားပေးခံရခြင်းကိုခံစားရရန်မလိုပါ. လည်း, ရွေးချယ်မည့် ဦး တည်ရာကိုရွေးချယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူသွားသည်, အထူးသဖြင့်စိတ်တွင်သတ်မှတ်ဘတ်ဂျက်နှင့်အတူ. ထို့ကြောင့်, သငျသညျ, အခြားအဖွဲ့ ၀ င်များနှင့်အတူ, လေယာဉ်ပျံများကဲ့သို့အပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်အပေါ်ဖုန်းခေါ်ယူနိုင်ပါတယ်, ငှားရမ်းခ, အစာ, စည်ပင်, ပြီးတော့နောက်ထပ်အများကြီးပဲ. အပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင်းလိုအပ်သည်အရာဖြစ်တယ်, အုပ်စုခရီးစဉ်အတွက်စီစဉ်နေစဉ်, အတူတကွထိန်းသိမ်းရန်.
2. Split-Up, တစ်ခုလုံးကုန်ကျစရိတ်ပုံ
ကုန်ကျစရိတ်များကိုမည်သို့ခွဲခြားရမည်ကိုရှာဖွေကြည့်ပါ. အခြားအဖွဲ့ ၀ င်များအကြားစုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ကိုခွဲဝေရန်နည်းလမ်းများနှင့်နည်းလမ်းများကိုဆုံးဖြတ်ပါ. ဥပမာအားဖြင့်, သင်ဟိုတယ်အခန်းဘွတ်ကင်တစ်ခုလုံးအတွက်တာဝန်ရှိသလား, သို့မဟုတ်သင်တစ်ဝက်ခွဲဝေယူသင့်သည်? သို့မဟုတ်, တက္ကစီငှားရမ်းခြင်းနှင့်နေ့စဉ်ထွက်ခွာခြင်းများကဲ့သို့သောတာ ၀ န်ယူမှုများကိုသင်စိတ်ဝင်စားပါသလား? များစွာသောအုပ်စုခရီးစဉ်များ, တာ ၀ န်တစ်စုံတစ်ရာကိုယူခြင်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ချီးမွမ်းထိုက်သည်. ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုလျော့နည်းစေပြီးခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သောကုန်ကျစရိတ်တစ်ခုလုံးကိုမျှတစေသည်.
သင်မကြာမီကြီးမားသောဘတ်ဂျက်ခရီးစဉ်အတွက်စီစဉ်ထားခဲ့လျှင်, အကောင့်တစ်ခုစီကိုကြိုးစားစမ်းကြည့်ပါ. သငျသညျကိုကြိုတင်ကောင်းစွာအတူတူလုပ်ဖို့ရှိသည်. အုပ်စုခရီးစဉ်တွင်ပါ ၀ င်သူအားလုံးသည်ငွေပမာဏကိုငွေသွင်းနိုင်သည်, လစဉ်, နောက်ဆုံးမိနစ်အခက်အခဲများကိုကယ်တင်ရန်ဖြစ်သည်. ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောဟိုတယ်များကိုင်ဆောင်ထားခြင်းကိုပိုမိုထိရောက်သည့်လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်, လေကြောင်းလိုင်းများ, နှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အစားအစာ.
အုပ်စုခရီးစဉ်အတွက်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း Spree အပေါ်နေစဉ်, သင်၏ငွေနှင့်အနည်းငယ်တက်ကြွသောဖြစ်လိမ့်မည်. စီးပွားဖြစ်သယ်ဆောင်သူများကိုအာရုံစိုက်ပါ. ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်လေကြောင်းလိုင်းများစွာရှိသည်, လက်တဆုပ်စာခရီးသွားလာ packages များ hosting. သင့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုလုံးကိုဆွေးနွေးခြင်းပြီးနောက်သင်၏လှုပ်ရှားမှုစီစဉ်ပါ. ဥပမာအားဖြင့်, ရောမမြို့ကိုသွားတဲ့ခရီးကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်တယ်, အေသင်, နှင့်မော်လ်တာမှတဆင့်အစ္စတန်ဘူလ်. သို့မဟုတ်အခြား, ထံမှသင်၏အုပ်စုခရီးစဉ်စတင် ပရာ့ဂ်မှဘာလင်, ဘူဒါပက်စ်နှင့်ရီဂါတို့သည်ရွေးချယ်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်! ခင်ဗျားတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်တွေနဲ့အတူရိုင်းစိုင်းတဲ့လမ်းခရီးခရီးတစ်ပတ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်ကြာဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုကြုံတွေ့ရရင်ကော? အချိန်အများစု, ရာသီဥတုကအဟန့်အတားဖြစ်စေတယ်. မသက်ဆိုင်ဘဲမူလတစ် ဦး မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်း၏, နေရောင်သို့မဟုတ်လေထန်ရိုက်လျှက်, နှင့်အတူကူညီခဲ့ကားထဲတွင်ခရီးသွားလာ ခေါင်မိုးထိန်, ကောင်းချီးတစ်ခုဖြစ်သည်! တစ်ခုလုံးကိုလုပ်နေစဉ်၎င်းသည်အပြည့်အဝလွှမ်းခြုံနိုင်ခြင်း၊ ခရီးသွားအတွေ့အကြုံကို တစ် ဦး လျှော့ပေါ့.
အစားအစာနှင့်ပတ်သက်သောအငြင်းပွားမှုသို့မဟုတ်အငြင်းပွားမှုမရှိလျှင်အုပ်စုလိုက်ခရီးစဉ်သည်အောင်မြင်သောခရီးတစ်ခုဖြစ်သည်, အထူးသဖြင့်. ဟုတ်ကဲ့! အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ချင်းစီ၏စားနပ်ရိက္ခာကြိုက်နှစ်သက်မှုနှင့်အတူမေးခွန်းပေါ်လာသည့်အခါအုပ်စုအများစုသည်မျိုးပွားမှုကိုမထီမဲ့မြင်ပြုကြသည်. ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများတွင်, အပြုသဘောဆောင်သောအတွေးအခေါ်နှင့်ကျန်းမာသောအစားအစာသည်သင်၏ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သင့်သည်. စားသောက်ဆိုင်စစ်ဆေးမှုကိုခွဲထုတ်လိုက်ခြင်းကအိမ်ထောင်ဖက်အချင်းချင်းပြproblemsနာများနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုဖြစ်စေသည်. ဥပမာအားဖြင့်, တစ်ဆယ်အုပ်စုတစု၌တည်၏, လူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကငွေတောင်းခံလွှာတစ်ခုလုံးကိုပေးချေသည် ဝိုင်ပုလင်း, နောက်ပိုင်းတွင်အုပ်စုရှိအခြားသူများသည်ကြားကာလတွင်ပေးချေသည်, သိသိသာသာရှုပ်ထွေးမှုများရာအရပ်ကိုယူပါလိမ့်မယ်. ဒါကြောင့်, အစဉ်အမြဲစစ်ဆေးမှုများကွဲအတွက်ယုံကြည်ပါတယ်. သို့မဟုတ်အခြား, သင်လုပ်နိုင်သည်မှာ 'buddy-pair' ဖြစ်သည်။ အုပ်စုထဲမှအခြားသူတစ် ဦး ဦး နှင့်သင်၏အစုကိုစည်းရုံးပြီးငွေတောင်းခံရန်ဆက်သွားပါ.
Florence to Rome ရထားလက်မှတ်တွေ
Pisa to Rome ရထားလက်မှတ်
ရောမရထားမှ Naples ရထားလက်မှတ်တွေ
5. အသုံးစရိတ်များနှင့်ပါ ၀ င်စွာတွက်ချက်ပါ
နည်းပညာဆိုင်ရာအသံဖြစ်ချင်တယ်, နှင့်အုပ်စုအကြားတစ် ဦး စမတ်တစ် ဦး ချင်းအဖြစ်ထွက်မတ်တပ်ရပ်? သင်၏လိုအပ်ချက်များအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်အွန်လိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းအမျိုးမျိုး၏အကူအညီကိုရယူပါ, ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ဆက်စပ်သော. ကဲ့သို့သော applications များအပေါ်ကျိန်ဆို Splitwise သို့မဟုတ် Google document, သူတို့နှစ် ဦး စလုံး access ကိုအုပ်စုတွင်လက်ရှိအားလုံးခွင့်ပြုအဖြစ်, ကြည့်ရှုပြင်ဆင်ရန်, သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်နှုန်းအဖြစ်. သို့သော်သူတို့၏တစ် ဦး ချင်းအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောလက္ခဏာများကိုသတိထားပါ.
သင်သည်ဤလျှောက်လွှာများတွင်အုပ်စုတစ်ခုကိုသင်ဖန်တီးသည်, အုပ်စု ၀ င်များသည်အလျင်အမြန် log in လုပ်နိုင်သည့်အပြင်ကုန်ကျစရိတ်တစ်ခုလုံးကိုရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ခွဲနိုင်သည်. ငွေတောင်းခံလွှာအားရှင်းလင်းခြင်းအတွက်သတိပေးချက်များသည်သက်ဆိုင်ရာလူအများထံသို့ဖော်ရွေသောသတိပေးချက်များပေးပို့သည်. အုပ်စုခရီးစဉ်ကုန်ကျစရိတ်များကိုခန့်မှန်းရန်စီစဉ်နေစဉ်, နှုတ်ဖြင့်ငွေပြန်အမ်းခြင်းနှင့်ငွေရှင်းခြင်းများကိုရှောင်ကြဉ်ပါ. ငြိမ်းချမ်းစွာတွေ့ကြုံခံစားရန်ဤအရာကိုသတိရပါ ရှေ့သို့သွားပါ.
Rotterdam to Paris Train လက်မှတ်တွေ
6. အခွန်အခအားလုံးကိုဖြေရှင်းပေးပါ (ရှိလျှင်)
တစ်ချိန်ကသင်သည်အဖွဲ့လိုက်ခရီးစဉ်ကိုနှစ်သက်ပြီးအိမ်သို့ပျော်ရွှင်စွာဆင်းသက်နိုင်သည်, သင်၏ငွေတောင်းခံလွှာဟောင်းများကိုဖြေရှင်းရန်အချိန်ရောက်ပြီ (ရှိလျှင်)! အကြွေးဟောင်းတွေကိုပြန်ပြီးဖြေရှင်းတာကပိုကောင်းတယ်, သင်သဘောတူထားသည့်အချိန်ကာလအတွင်း. ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, အဲဒါဟာခရီးဆောင်အိတ်တစ်ခုလိုရပ်တည်! များစွာသောသူတို့သည်ပေးဆောင်ခြင်းကိုပိုနှစ်သက်ကြသည် အမျိုးမျိုးသောအွန်လိုင်း applications များ, ဒါကြောင့်ပါးရည်နပ်ရည်အသံအဖြစ်. အချို့သောပါးနပ်သောစိတ်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီကိုပေးဆပ်လိုကြသည်, ငွေသား. သင်တစ်ပါတ်အတွင်းသို့မဟုတ်ထိုမျှလောက်ပေးချေကြောင်းသေချာပါစေ. သို့မဟုတ်အခြား, သငျသညျလာမည့်အုပ်စုခရီးစဉ်များအတွက်ဖိတ်ကြားချက်ကိုအပေါ်ဆုံးရှုံးသွားကြသည်.
အဲဒါမရှိဘူး, သို့သော်ကမ္ဘာအနှံ့ခရီးသွားခြင်းသည်အကန့်အသတ်မရှိခရက်ဒစ်ကဒ်သို့မဟုတ်ငွေသားစီးဆင်းမှုမရှိပဲမည်သည့်အခါမျှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းလူအများကြားမှားယွင်းသောယုံကြည်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်. ဒါမှမဟုတ်တစ်ယောက်ယောက်ကခရီးစဉ်တစ်ခုလုံးကိုထောက်ပံ့တယ်ဆိုရင်! ဒါပေမယ့်တူညီတာကိုမယုံတာကပိုကောင်းတယ်. မည်သည့်အသုံးစရိတ်မှမပါဘဲခရီးသွားလာခြင်းမရှိကြောင်းသေချာပါသည်. အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောလမ်းညွှန်ချက်များသည်သင်နှင့်သင်၏ထွက်ခွာမည့်ဂိုဏ်းများကိုလာမည့်ခရီးများအတွက်အတူတကွထိန်းသိမ်းထားမည်မှာသေချာသည်. သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်ရှင်းလင်းသောခေါင်းဆောင်မှုရှိပါ, သင်၏အခြားခရီးသွားဖော်များနှင့်ပူးပေါင်းပါ, ထို့နောက်အုပ်စုခရီးစဉ်သည်အိပ်မက်တစ်ခုမျှသာဖြစ်လိမ့်မည်!
တိုက်ကြီးကိုရထားနဲ့သွားလာပါ အတူစာအုပ် တစ်ဦးကရထား Save!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “6 ဘတ်ဂျက်အပေါ်အုပ်စုတစ်စုခရီးစဉ်စီစဉ်ရန်ကျွမ်းကျင်သောအချက်များ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သငျသညျဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. တစ်ဦးနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည် ဤ blog post မှ link ကို. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/group-trip-on-budget/ ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
budgettravel grouptravel GroupTrip ခရီးသွား traveltips TripOnBudget